Chinese dogs, sorry diplomat advise Myanmar not to release Daw Suu (ဒေါ်စုကို ပြန်မလွှတ်ရန် တရုတ်ကမြန်မာကို အကြံပေးခဲ့) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Malacca’s China made monorail and cheap Korean nuclear reactors
The essentials against graft »
“အနောက် အုပ်စု နိုင်ငံ တွေ ဟာ မထင်မရှား လျှုလျှောက်ဘို ကို နိုဘလ် ဆုပေးလိုက် တာကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့အချိန် တိုင်းမှာ မိတ်ဆွေရင်း ချာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ စိတ်ပျက်ရကြောင်း တကယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပြန်လွှတ်မယ်ဆိုရင် တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လတ်တလောမှာအခြား ပြစ်မှုတွေ ပါရှိသေး တဲ့ လျှုလျှောက်ဘို ကို ပြန်လွှတ်မှာ မဟုတ်သေးတဲ့အတွက် မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ဒေါ်စု ကို ပြန်လွှတ်ပေးတာဟာ တရုတ်ကို အရှက်ခွဲသလို မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေမှာစိုးတဲ့ အတွက် ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကို စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ နေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မှာ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ က တွေ့ ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့တယ်”
This entry was posted on December 12, 2010 at 1:47 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.